Izinzuzo Zokubhala Okubhaliwe | Izincwadi Zamanje
Bekuhlale kushiwo njalo ukubhala kuyayekelela, esiza ukubhala kangcono futhi kangcono futhi okufana nokwelashwa okulula kokugwema ukusebenzisa lapho okuthile kusisinda noma kusikhathaza.
Kungashiwo ukuthi kunezinhlobo eziningi zokubhala njengoba kunezinhlobo zabantu. Kukhona ababhala ukudala imibhalo, kukhona labo ababhalayo ukuze bathukuthele, kukhona labo ababhalela iqiniso lokubhala nje ... Futhi wena, kungani ubhala?
Noma ngabe yisiphi isizathu sakho, namhlanje sikutshela ngezinzuzo eziningi zokubhala ngobuciko. Uma uzizwa ungcono futhi ukhululeka ngokwengeziwe lapho ubhala, namuhla uzothola ukuthi kungani.
Yini okusiletha ngayo ukubhala ngobuciko?
Ukuthuthukiswa kwe umcabango, kusuka ukufunda, Of the uzwela futhi we ikhono lokulalela kwabanye.
Ukuthuthukiswa kwe ulimi nokukhuluma.
Kuthuthukisa i- ukuhlushwa nokucabanga.
Khuthaza ukuhleleka nokucabangisisa esihlokweni esithile.
Isici esiyisisekelo sokuthuthukiswa kwe- umcabango nobuciko.
Isici se- ukuphumula nokuzijabulisa.
Ukutholwa kwe isichazamazwi esikhulu, ukuqonda izakhiwo eziyinkimbinkimbi zokwenziwa noma ikhono loku-oda ukulandisa, ngaphezu kokusebenza ngokwanele, ukuhlangana noma ukuhlangana kwemicabango.
Bashukumisa izingane ukuba zifunde nokufuna ngokuzimela imininingwane eyanelisa ilukuluku lomuntu siqu.
Njengoba ukwazi ukubona, ukubhala kanjalo kuba yifayela le- i-oasis yomcabango futhi ku- umuthi womphefumulo. Uma ucabanga ukuthi awukwazi ukwenza izincwadi kepha uzizwa ubhala kahle ngeqiniso elilula lokubhala, ungayeki ukukwenza. Lokhu kunezinzuzo eziningi kuwe nasempilweni yakho yonke.
Uma indodana noma indodakazi Uma uhlushwa yingcindezi, uvalo, noma unenkinga yokugxila, ukwenza izivivinyo zokubhala eziqondisiwe kungakusiza ukuthi ugxile kangcono futhi "uyeke" ukukhathazeka noma usizi lwakho. Futhi, kunjalo, ukukusiza ngesipelingi sakho, ukuthi ube nobuciko futhi ucabange.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Izinzuzo zokubhala okudala
Ohloniphekile, uCarmen. Ngiyabonga ngokubhala, ngizokwabelana. Sanibonani.
Ngiyabonga ngokuphawula nokuhlanganyela 🙂 Sanibonani!